Mufambisi wesimbi wakawedzerwa unochengetedzwa unotengesa mufekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Security > Marudi>Kuchengeta michina yesimbi kwakawedzerwa
Kuchengeta michina yesimbi kwakawedzerwa kuri kuva kunokosha zvikuru mukugadzirwa kwedu kwezvinhu nemagarasi uye upenyu nokutanga kwegadziriro yemazuva ano. Pane rumwe rutivi, kutarisira michina kunogona kudzivirira michina inoshanda zvakanaka; kune rumwe rutivi, rinogonawo kudzivirira kuchengeteka kwavashandi. Uye nezvimiro zvechivako chakasimba uye chinogara, Varindi vemichi yesimbi vakawedzerwa vakakodzera zvikuru nokuda kwemarudzi ose ezvinhu akadai semuchina wokucheka, michina yamagetsi, kudya muchina uye muchina wokuveza mumafekitari nenzvimbo yokugadzira.
Zvinhu zvinochengetedzwa zvemvura
I simba rakakwirira, chivako chakasimba.
Ndidzivirira kuchengeteka kwavashandi.
Ini kudzivisa kupo kweguruva, tsvina nezvimwe zvinhu zvinopinza.
L Durable nenhambo refu youpenyu.
Kushandiswa kwemichina yakawedzerwa yesimbi
Kuwedzerwa kwemichina yesimbi kunoshandiswa zvikurukuru nokuda kwemarudzi ose ezvinhu akadai sezvishandiso zveCNC, muchina wokushaya, kugadzira, Michina yemagetsi, michina yokudya uye michina yokuveza mumafekitari nenzvimbo dzokugadzira.
Purogiramu yokuchengeta michina yakawedzerwa
Taga: expanded metal machine guarding, expanded mesh, expanded metal screen,
Ndeipi iri mipimo yemhosva yakawedzerwa?
Mipimo yakawanda vangani iripo?
Mavara ezvinhu anowedzerera
Kupararira kunogona kukamuraniswa?
Mienzaniso yokushandiswa kwokurapwa kwomushi
Zvinhu zvesimbi rakafukurwa
Kurambiswa kwokugadzira zvinhu zvesimbi kwakawedzerwa
Chii chinogadzirwa nesimbi rakawedzerwa?